ပြည်တွင်းတွင် ရောင်းချရန် တိုယိုတာကယ်ဒီးနားများ | တိုယိုတာကယ်ဒီးနားကားဈေးများ Carmudi Myanmar [Burma]
Silver Toyota Caldina Van 2001 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,Original TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag...
Pearl White Toyota Caldina 2002 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလု...
Lks 227 ညှိနှိုင်း
Black Toyota Caldina 2003 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ...
Pearl White Toyota Caldina 2000 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလု...
Blue Toyota Caldina 2003 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ပြတင...
Silver Toyota Caldina 2002 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝ...
Black Toyota Caldina 1999 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမ...
Lks 207 ညှိနှိုင်း
Black Toyota Caldina ZT 2003 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်မျ...
Silver Toyota Caldina 2003 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံ...
Blue Toyota Caldina 2002 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှ...
Pearl White Toyota Caldina 2003 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလု...
Pearl white Toyota Caldina GT-Four N Edition turbo 2002 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steeri...
Orange Toyota Caldina 2002 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံ...
Blue Toyota Caldina 2003 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှ...
Silver Toyota Caldina 2002 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံ...
Black Toyota Caldina 2001 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ...
Black Toyota Caldina 2001 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမ...
Pearl White Toyota Caldina 2001 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလု...
White Toyota Caldina 2000 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ပြတ...
Black Toyota Caldina Robot 2000 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ...
Silver Toyota Caldina 1999 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံ...
တိုယိုတာ ဘရန်ဟာ အိမ်စီး၊ ဆလွန်း၊ အစ်ယူဗီ၊ ဇိမ်ခံ ကားများကို စုံလင်စွာ ထုတ်လုပ်နေသည့် နည်းတူစွာ ပြည်တွင်းမှာ ရေပန်းစားလှတဲ့ ဘရန်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အပိုပစ္စည်းများကိုလည်း အလွယ်တကူ ၀ယ်ယူနိုင်တဲ့အတွက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန် အော်တိုမိုတစ် ကားထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီ တစ်ခု ဖြစ်ပြီး ၁၄ ခုမြောက် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ကုမ္ပဏီ တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နှစ်ကို ယာဉ်ပေါင်း ၁၀သန်းကျော်ကို ထုတ်လုပ်နေတဲ့ အမြန်ဆုံး ကားထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီ တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ တိုယိုတာဟာ ဆလွန်း၊ ဟိုက်ဘရစ်၊ ဇိမ်ခံနဲ့ တိုယိုတာ တောင်းအေ့စ် တို့လို ထရပ်နဲ့ လူစီးကားတွေကို ထုတ်လုပ်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီ တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ လပ်ဆပ် ဇိမ်ခံကားတွေကိုတော့ တိုယိုတာ ကုမ္ပဏီ ရဲ့ အခွဲတစ်ခု အနေနဲ့ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုယိုတာ ကားတွေရဲ့ ပြည်တွင်းအသုံးပြုမှုကတော့ ထိပ်ဆုံးကပဲလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
တိုယိုတာ ကားတွေထဲက ယခုဖော်ပြမဲ့ တိုယို တာ ကယ်ဒီးနားကားတွေဟာ အသုံးပြုရာမှာ တာရှည်ခံမူ၊ အဆင်ပြေမှုတို့ကြောင့် လူကြိုက်များပါတယ်။ ဌင်းရဲ့ အင်ဂျင် အနေနဲ့ ၁၅၀၀ စီစီ၊ ၂၀၀၀ စီစီ၊ ၂၂၀၀ စီစီ အစရှိသဖြင့် ရှိပါတယ်။ ၁၅၀၀ စီစီကတော့ ပြည်တွင်းကြိုက် ဖြစ်ပါတယ်။ အော်တို ဂီယာနဲ့ ကားတွေ ဖြစ်ပြီး ကယ်ဒီနား ဗန်တွေဟာ ပစ္စည်း ၀န်ပို့တင် နိုင်မှုတို့ကြောင့် လူကြိုက်များပါတယ်။ နောက်ထွက် စက်ရုပ်လို့ ခေါ်ကြတဲ့ ကယ်ဒီနား နောက်ထွက်တွေဟာဆိုလျှင် အတွင်းပိုင်း တီဗီနဲ့ ပါဝါ ၀င်းဒိုးပါရှိမှုတွေ ပိုပြီး ပါရှိလာတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကယ်ဒီးနားမှာ ပုံ မတူတဲ့ မော်ဒယ် နှစ်မျိုး ရှိတဲ့ အထဲက ကယ်ဒီနား စက်ရုပ်တွေဟာ ဆိုရင် မော်ဒယ်လည်း ပိုမြင့်ပြီး ပုံစံလည်း ပိုပြီး ဆန်းသစ်လာတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မှန်အမည်းတွေကို များသောအားဖြင့် တွေ့နိုင်ပြီး အတွင်းမှာ ထိုင်ခုံတွေက အစ ဒီဇိုင်းတွေ ဆန်းသစ်ထားပါတယ်။ ပါဝါ ၀င်းဒိုးတွေ ဖြစ်ကာ တီဗီ၊ စပီကာတွေက အစ ပါလာပါတယ်။ အရင်ပုံဖြစ်တဲ့ ကယ်ဒီးနား ဗန်တွေကတော့ ဗန်တိုက်ပုံစံ ဖြစ်သည်နဲ့အညီ အကြမ်းထည် ပုံစံကို ပဲ ဦးစားပေးခဲ့သလို့ပါပဲ။ လေးနဲ့ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကားအနောက်ပိုင်းက အနည်းငယ် မြင့်တက်နေမှာ ဖြစ်ပြီး အရှေ့ပိုင်းက အနည်းငယ် နိမ့်ပါတယ်။ အတွင်းပိုင်းကလည်း ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ဖွဲ့စည်းထားပြီး သူရဲ့ မော်ဒယ် ဂရိတ်တွေအလိုက် တံခါးပေါက်မှာ ပါဝါ ၀င်းဒိုးပါရှိမှု၊ တွေကအစ ကွဲပြားသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်ဆန် ပေါ့ပါးကာ ၀န်တင်ဖို့ အဆင်ပြေလှတဲ့ ကယ်ဒီးနားကားတွေ ပါပဲ။
ကယ်ဒီးနားတွေဟာ ပြည်တွင်းမှာ ဈေးနှုန်းသက်သာမှု ၊ ရုပ်ထွက်လှမှု တို့ကြောင့် အသုံးများပါတယ်။ ၂၀၀၁ ၊ ၂၀၀၂ နောက်ပိုင်း ပုံပြောင်း ကယ်ဒီနားတွေဟာ နောက်ပိုင်း ဒီဇိုင်း ဆန်းသစ်လာခဲ့ပြီး မှန်အနက်နဲ့ လူထုရဲ့ အကြိုက်ကို ပုံသွင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဆီစားလည်း သက်သာတဲ့ အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ အစိုးရ ပေါ်လစီကြောင့် စက်ရုပ် ဆိုတဲ့ နောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ မော်ဒယ်ကားတွေကို ပိုမို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စီးလို့ကောင်းပြီး သက်တောင့် သက်သာ ဖြစ်တဲ့ကားတွေ ဖြစ်ပြီး ကွိုင် တိုဒ် ပုံစံနဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ အကြမ်းခံလို့ ၀ယ်ယူကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပါရှိတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေ အနေနဲ့ ကယ်ဒီးနား စက်ရုပ်တွေမှာဆိုလျှင် မှန်ကာလာ၊ အလွိုင်းဝှီး၊ အပူအအေး ထိန်းချုပ်မှု စနစ်၊ ဘလူးတုမ့် တို့ပါဝင်လာပါတယ်။ ကယ်ဒီးနားရိုးရိုး ဗန်တွေမှာတော့ ဘီးက အလွိုင်းတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ ရိုးရိုး ဘီးတွေပါပဲ။ မော်ဒယ် နိမ့်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမဲ့ ပြည်တွင်းမှာတော့ အသုံးများ အကြိုက်များနေတုန်းပါပဲ
ဈေးနှုန်းနဲ့ ပြည်တွင်း ရရှိနိုင်မှု အခြေအနေ
စက်ရုပ်တွေ အတွက်ကတော့ သိန်း ၁၅၀ လောက်နေ သိန်း နှစ်ရာလောက်ထိ အစားစား ရှိနေပါတယ်။ ကယ်ဒီနား ဗန်ကတော့ သိန်း ၁၂၀ လောက်ကနေ သိန်း ၁၄၀ လောက်ထိ ရှိပါတယ်။ တစ်ပတ်ရစ်ကိုပဲ လေလံတွေကနေ အ၀ယ်များတယ်။ တစ်ပတ်ရစ်ကို မှ လေလံကမှာ စီးပြီး ပြန်ဈေးလျော့ရောင်းတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ လေလံ ကားမှာတဲ့ စိတ်ချရတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေကနေတစ်ဆင့် မှာယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး မျက်မြင် တွေလည်း ရှိနေပါတယ်။
ကယ်ဒီနားတွေဟာ မော်ဒယ် ၂၀၀၀ ၊ ၂၀၀၁ လောက်ကနေစပြီး ပုံပြောင်းတဲ့ အတွက် ယခု လက်ရှိ ပေါ်လစီ အရ မှာယူလို့ မရနိုင်တော့ပါဘူး။ မော်ဒယ်အမြင့်တွေဖြစ်တဲ့ ၂၀၀၈ ကနေ နောက်ပိုင်းထိကို စလစ်လွတ်မှာယူနိုင်ပြီး ၂၀၀၀ ကနေ ၂၀၀၈ ထိကို ကယ်ဒီးနား ပုံဟောင်းနဲ့ အသစ် နှစ်ခုလုံးမှာ ၀ယ်ယူ စီးနင်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမဲ့ စလစ်ဈေးတော့ ထည့်ပြီး ပေါင်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကယ်ဒီနား ဗန်တွေကိုတော့ ပြည်တွင်းအခေါ်အနေနဲ့ အလွယ် မှတ်ရလွယ်အောင် “ ကြက်တူရွေး “ လို့ခေါ်တာကို ဟာသဆန်ဆန် သိကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကယ်ဒီးနား နောက်ထွက် ပုံပြောင်းတွေကိုတော့ စက်ရုပ်တွေနဲ့ တူတဲ့အတွက် “ စက်ရုပ် “ လို့ ခေါ်ကြတာကို တွေ့ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်စီးနဲ့ တက္ကစီကားတွေ အတွက် သင့်တော်လှပါတယ်။ ဒီဇိုင်း နှစ်သက်ပြီး စွမ်းဆောင်ရည် နှစ်သက်သူတို့ ကယ်ဒီနားတွေကို ၀ယ်ယူ စီးနင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။